Sidee qofku is-bedel u sameyn karaa? Mase Dooneysaa Adiga Inaad Is Badal Sameysid, Hadaba Qaado Tallooyinkan.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Sidee qofku is-bedel u sameyn karaa? Mase Dooneysaa Adiga Inaad Is Badal Sameysid, Hadaba Qaado Tallooyinkan..
Published: April 9, 2016, 12:28 pm
Waxaa jiray tuug wadooyinka dadka ku dhaca, burcad ah. Aad caan u ahaa xilligaas. Habeen buu fuulay darbi guriga gabar uu aad u jeclaa, markuu rabay inuu gidaarka ka dago ayuu maqlay, qof Salaat tukanayay oo aqrinayay aayada Quraanka: Miyaysan weli waqtigu u iman (u dhowaanin) kuwa xaqa rumeeyay inay u khushuucdo quluubtoodu xusidda Eebe (Suurat Al-Xadiid)
Noloshu waa in is-bedel la sameeyo. Qof kasta isaga ayaa ka mas’uul ah inuu is bedelo. Marar badan waxaan aragnaa dhacdooyin loogu talagalay inaan wax ku qaadano, iskuna bedelno. Nasiib darro, kama faa’iideysano inaan is-bedel nafteena ku sameyno. Waqti intee le’eg ayaaan sugeynaa si aan isu bedelno?
Xusuusnow: Marnaba, Marnaba dib ha u dhigan, ha sugin in aad Alle SWT u noqoto. Ogow haddii aadan hadda go’aan gaarin oo is-bedel sameyn ma jirto xilli uu waqtigu sax kuu noqonayo, Waqtigu waa Iminka.
Barnaamijka KOBCI MASKAXDAADA Iyo Qodobo Muhiim ah Oo Ku Saabsan Kalsoonida..